ICity isiyehlile ku-R15.5m edayisa ngawo uManyama | isiZulu
Unozinti wele-PSL osefomini akaneme ngokungabizwa kwiBafana
Cape Town - ICape Town City kubikwa ukuthi isiyehlisile imali edayisa ngayo umdlali wayo ogijima esiswini nohlaselayo, uLebogang Manyama, isuka ku-R15.5m iya ku-R12.4m.
Ompetha base-Afrika, iMamelodi Sundowns, ilindeleke ukuba ibe yiqembu lokuqala kuleli ukuthi lisayine lesi sethenjwa seCity esineminyaka engu-26 ubudala, nesavalela enethini amagoli angu-13 ePremiership kumaCitizens ngesizini eyedlule.
ISport24 ibisanda kubika ukuthi lo mdlali akasemuhle kahle kule kilabhu kulandela ukuhilizisana nomqeqeshi weqembu, uBenni McCarthy.
OLUNYE UDABA: UBenni uthi isethenjwa seCity siphazanyiswa yimibiko yokujoyina iSundowns
Ngokuhamba kwesikhathi uMcCarthy uthe unqume ukungamsebenzisi lo mdlali ngenxa yokuthi uphazanyiswe yimibiko yabezindaba eqagula ukuthi uzoshiya kule kilabhu.
Ngale kokufunwa amaBrazilians, iqembu laseTurkey, iKonyaspor, nalo kubikwa ukuthi ligaqele ukusayina lo mdlali ongowokuzalwa eTembisa.
Yize noma ngaphambilini iCitizens ibingazimisele ngokudedela uManyama ukuthi ahambe, kubukeka sengathi ukwehlisa imali edayisa ngayo lo mdlali weBafana Bafana kuwuphawu lokuthi uvuliwe umnyango kumaqembu amfunayo.
Njengoba sekusele izinsuku ezingaphansi kwezimbili ngaphambi kokuba kuvalwe iwindi lokuthengwa kanye nokudayiswa kwabadlali ngo-Agasti, kusazobonakala ukuthi lo mdlali uzogcina ekwazile yini ukujoyina iqembu afuna ukudlala kulona.